Thwebula Nymgo 5.5.26 – Vessoft
Nymgo – a software Ukugunda for amakholi wefoni abangani ezingxenyeni ezahlukene zomhlaba. Nymgo kwenza ukubiza futhi uthumele i-SMS ku-ababhalisile on ucingo mobile. Ngesikhathi kukhethwa yezwe ethile, isofthiwe ubonisa intengo umzuzu ucingo opharetha ehlukahlukene mobile per. Nymgo isebenzisa ubuchwepheshe ekhethekile ukuqinisekisa ukulahlekelwa sakugcina quality nokwandisa zokuxhumana ngezwi. Nymgo futhi inquma indawo eseduze of the number zidayilwe futhi kwenza ukuhlola semthethweni ikhodi yedolobha.
Izingcingo kunoma ingxenye emhlabeni
Kwakha Book Ikheli
Ubonisa amanani opharetha mobile
The ukubona inombolo ezoshayelwa
Amazwana on Nymgo:
Nymgo Ahlobene software:
TeamSpeak 3.1.1 Client futhi 3.0.13.6 Server
English, Français, Español, Deutsch... KakaoTalk 2.5.3.1454
English, Українська, Français, Español... GIMP 2.8.20